Cameroon - Palace of Unite: New Leaks of Confidential Documents - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA »Cameroon - Palace of Unite: Dhacdooyin cusub oo sir ah
Inta badan maalmo yar, ugu yaraan sadex dukumenti oo qarsoodi ah oo ka soo jeeda hogaanka Madaxtooyada Jamhuuriyadda, waxay isku heleen shabakadaha bulshada.
Hemorrhage ayaa sii socota. Dukumentiyada qarsoodiga ah ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa weli laga helayaa shabakadaha bulshada. Tusaalihii ugu dambeeyay waxa weeye in fariin-farriin farriin ah oo ay soo saartay Wasiirka Arrimaha Dibedda u qaabilsan Madaxtooyada.
Farriintan ayaa saxiixday 11 April 2019, Joseph Beti Assomo wuxuu u gudbiyaa dhammaan adeegyadda waaxdiisa, mawduuca fasaxa qaran ee 20 waxaa laga yaabaa 2019, oo uu soo qoray Madaxa Gobolka, Paul Biya. "Midnimada ee kala duwanaanta, hantida ugu weyn ee dadka Camerooniyaanka ah ee ay marayaan marxaladdooda xaraashka ah", ingiriisi: "Midnimada ee kala duwanaanta, Hantida ugu weyn ee dadka reer Cameroon ee horay u socdey ayaa u socdaalaya soohdimaanta".
Dhowr maalmood ka hor, April 8 waa warqad ka timid Nabadsugida Difaaca ee Safaaradda Cameroon ee Berlin ee soo daatay. Henri Robert Bidja ayaa soo jiidatay dareenka nabadgelyada madaxweynenimada ee rabitaanka kooxda si ay uga carqaladeeyaan Biyo Biya ee ku xiga Switzerland. "Kooxda Shirkadda Ka-hortagga Khayraadka Dabiiciga ah (BAS), koox ka mid ah qurba-joogta reer Cameroon oo ay la dagaallamaan Paul Biya, ayaa waxay abaabulayaan sharciyo si ay u carqaladeeyaan ayna u weeraraan Madaxa Waddanka intii lagu jiray qorshahaan joogitaanka Switzerland.akhriyo dukumeentiga.
Muddo dheer ka hor, duxda waxay ku lug lahayd farriin fax ah oo ka timid madaxa maamulka gobolka, Simon Pierre Bikele, ayaa saxeexay 4 Abriil waxana lagu soo gudbiyay madaxda Swiss, isaga oo doonaya in uu helo oggolaansho si uu u qaado hubka si uu uga faa'idaysto amniga madaxtooyada, iyada oo loo eegayo madaxa Barakacayaasha ee Jeniinka.
Sayniska siyaasadeed Mathias Eric Owona Nguini falanqee in boogahaas loo habeeyay si loo yareeyo Paul Biya dhibaato.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/15/cameroun-palais-de-lunite-nouvelles-fuites-de-documents-confidentiels/
Waxaad NALET ku soo laabaneysaa 18 04 2019 - VIDEO
Hoggaamiyeyaasha is-ka-joojinta waxay diidaan Nidaamka Ka-saaridda degdegga ah inta lagu guda jiro Shirka Ururrada Degdega ah
Trick to watch Game of Thrones lacag la'aan ah (iyo sharci ahaan)
Taariikhda - Hudheelo aad u khaasa oo ku yaal Moulins: dukaanka Buisson ama muuqaal heersare ah oo ah saldhigga Louis XVI